Mmetụta gburugburu ebe obibi nke SPAM | Martech Zone
Ndi akwukwo na WebpageFX kwa izu edebela ihe omuma nke na akowa gburugburu SPAM. Edeela m tupu oge ahụ SPAM na ụlọ ọrụ emailỌ na-eju m anya na ọ nweghị onye nwere ọganihu ọ bụla na ịlụ ọgụ na SPAM.
Ọ bụrụ na ISP dị ka Google, Yahoo! na Microsoft chọrọ n'ezie iwepu onwe ha nke SPAM, ha ga-enye adreesị ozi-e echedoro ebe ISP (Onye Na-enye Ọrụ Internetntanetị) na-achịkwa usoro ịpụ apụ karịa ESP (Onye Na-enye Ọrụ Email). Nke a ga - enye ha ohere igbochi ebe ọzọ. Ma Ewoo… anyị na-rapaara na a 20 afọ usoro na-adịghị egosi na a ga-rụọ ọrụ n'oge ọ bụla anya.